MM Abiy Ahimad: ‘Mootummaan federaalaa N. Tigraay waraanuuf yaada hin qabu’ – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMM Abiy Ahimad: ‘Mootummaan federaalaa N. Tigraay waraanuuf yaada hin qabu’
MM Abiy FBC Tigrinyaa waliin turtiin taasisan gaaffilee Tigraayitti ka’anirratti kan xiyyeeffatedha
Ministirri Muummee Abiy Ahimad mootummaan Federaalaa mootummaa Naannoo Tigraay waraanuufi jedhanii haasa’un ‘maraatummaadha’ jechuun himan.
(bbcafaanoromoo)–Gaaffiifi deebii Afaan Tigrinyaan FBC waliin taasisaniin dhimmoota Naannoo Tigraay akkasumas Ertiraa ilaallatan irratti dubbataniiru.
”Eenyutu eenyuun waraana? Mootummaan federaalaa maaliif Tigraayiin kan waraanu? Kuni dubbii maraannaati. Mootummaan federaalaa ummata ofii waraanuuf yaadas fedhiis hin qabu,” jechuun himan.
Dubbiin isaanii tibbanaa dhalattoota Tigraay akkasumas Eertiraa biratti ijoo dubbii ta’eera.
Torban dura gara Asmaraa imaluun kaampii leenjii waraanaa Saawwaa daawwachuun isaanii dhaaba TPLF naannoo Tigraay bulchaa jirutti waraana banuufi jedhanii xiinxaltoonn akka shakkan taasisee ture.
N. Tigraay paartilee fillannoorratti hirmaatanif waamicha dhiyeesse
Paartileen mormituu filannoo Naannoo Tigraay irraa hafan maal himatu?
Ibsa dhaabni naannichi bulchu baaseenis ummanni Tigraay akka qophaa’u akeekaa ture.
Dabalataan, Pirezidantiin Itti-aanaa naannichaa Dr Dabratsiyoon G/Mikaa’el ‘dhiibbaa siyaasaa uumuuf qaamoleen sadii wal-ta’umsaan dalagaa jiru jedhanii turan tibbuma daawwannaa MM Abiy sana.
Qamooleen sadan jechuun himatan, ”mootummaa Eertiraa, paartii Badhaadhinaafi baandoota” jedhan.
Naannolee Itoophiyaa kaanirraa addatti filannoo naannichi adeemsisuuf jedhu ‘gufachiisuufi’ sababa jedhu kaasu dura taa’aan Adda Bilisummaa Ummata Tigraay (TPLF) Dr Dabratisyoon G/Mikaa’el.
MM Abiy maal jedhan?
Naannoon filannoo nan taasisa yaada jedhutti yoo ciche ‘mootummaan federaalaa callisee hin taa’u’ jechuun qondaaltonni dhaaba Paartii Badhaadhinaa murteen naannoo Tigraay balaaleeffataa turan.
Ogeessonni seeraallee filannoo Naannoo Tigraay taasisuus yaade irratti gaaffii kaasaniiru.
Tibbana FBC’tti kan dubbatan MM Abiy garuu paartiin isaanii dhaaba kana dura siyaasa Itoophiyaa keessa olaantummaa qabaataa ture waliin waldhibdeen akka jiru dubbatanis, mariin akka xumuramu akka fedhan himan.
‘Ummata keenya waliin miti ummata biyyoota ollaa waliinu waraana hin barbaannu jechaa jirra’ kan jedhan MM Abiy, kanneen ofiif waraana yaadanitu waa’ee waraanaa haasa’aa jechuun dubbatan.
‘Bara kanatti wanti waraanatti nama kaasu jira jedhee hin yaadu, hin barbaachisuus’ jechuun himan.
Waldhibdee paartii isaanii waliin uumame mariin akka hiikamu akka barbaadan kan himan MM Abiy, ‘Tigraay miidhuuf hin yaadu’ jedhaniiru.
‘Dabratsiyoon deeggaramuu qabu’
MM Abiy ummanni Tigraay ‘Dr Dabratsiyoon G/Mikaa’el fi jaallan’ isaa ‘kanneen nagaa fedhani’ jechuun deeggaru qaba jechuun dubbataniiru.
‘Bulchaan Naannoo Tigraay jalqabaa eegalee mootummaa federaalaa waliin mari’ataniiru.
‘Rakkoo gama keenyaas ta’e gama isaanii jiru hiikuuf qophiin qaban yeroo hundaa kan mul’atuufi kan beekamu ture. Kuni ummata Tigraayirraa deeggarsa akka barbaachisuun nan amana,’ jechuun dubbatan.
Manni Maree naannoo Tigraay Komishinii filannoof anga’oota muude
Ta’us, namoonni kaan dhaabuma TPLF keessa jiran waldhibdeen naannichi federaala waliin qabu akka furamu kanneen hin barbaanne jiru jedhan.
Kanneen nagaa hin feene jedhan immoo ummanni Tigraay dhiisaa jechuuni qaba jechuunis dubbatan.
Erga aangootti dhufanii booda waldhibdee nagaa Ertiraafi Itoopiyaaf furmaata kan kennan MM Abiy Ahimad, hojii isaanii kanaan badhaasa Nobeelii Nagaallee ittiin argataniiru.
Kanaanis, mootummaan Ertiraa qoqqobbiin Dhaabbanni Biyyoota Gamtoomanii waggoota dheeraaf ‘shororkeessitoota deeggara’ jechuun irra kaa’ee ture araara Itoophiyaa booda irraa kaseera.
Booda kana mootummaan Ertiraa dhimma hidha Abbayyaa walqabatee Masriifi Itoophiyaa walitti fiduuf ergama fudhachuun sosso’aa akka turan xinxaltoonni ni himu.
Ertiraa daawwachuu MM Abiyyiifi himannaa naannoo Tigraay
Turtii FBC waliin taasisaniin MM Abiy hojii Ertiraa jajaniiru.
”Dhugaa dubbachuuf sa’aatii kanatti Ertiraan humna nagaa ta’u ishee Itoophiyaa qofa osoo hin taane addunyaan bareera.
”Yeroo ammaa Itoophiyaan rakkoo biyyoota tokko tokko waliin qabdu akka hiiktu mootummaan Ertiraa gahee addaa tapachaa jira.
”Waliin fayyadamna kan jedhu malee ummanni Ertiraas mootummaan Ertiraas lola hin barbaadu,” jechuun himan.
Filannoo fi tarkaanfii miidiyaa
Ajjeechaa Hacaaluu booda miidiyaalee tarkaanfiin irratti fudhatame keessaa miidiyaaleen naannoo Tigraay keessa jiru.
Ajjeechaa Hacaaluu booda hookkarri akka babal’atu miidiyaaleen naannoo Tigraay gochaa turan jechuun kan himatan MM Abiy, ‘kuni dogoggora guddaadha’ jedhan.
Kanaaniis, tarkaanfiin Abbaan Taayitaa Biroodikastingiii Itoophiyaa fudhate tarkaanfii biyya baraaruuti jechuun ibsan.
Dhaabichi booda balaaleeffatus ajjeechaa Hacaaluuf dabalatee paartiin biyya bulchu paartii naannoo Tigraay bulchu akka shakke ibsee ture.
‘Caffeen N. Tigraay filannoo gaggeessuf murtiin dabarse heeraan ala’
Gama kaaniin, dhimma filannoo yoo dubbatan Naannoon Tigraay waggaa booda akka biyyaatti filannoo gaggeessuu danda’a ture jechuun dubbataniiru. Ta’us, filannoon Itoophiyaa waggaa booda ta’u isaaf ragaan hin jiru.
”Filannoon waan hin hafne ta’e osoo jiru bajata miiliyoonaan lakkaa’amu ramadee filannoon gaggeessa jechuun isaa waan ajaa’ibu” jedhan.
”Koronaavaayirasiin osoo jiru filannoo gaggeessina jechuun Covid-19 Tigraayif yaaddoo miti jechaadhaa? Tigraayitti namni koronaavaayirasiiin hin qabamu jechaadhaa?
”Hospitaala ammayyaafi qoricha qabna jechaadhaa. Hubachuuf nama dhiba,” jechuun dubbatan.
”Mootummaan federaalaa bajata nu dhowwate jechaa filannoo gaggeessina jechuun isaanii na dhiba” jedhaniiru MM Abiy.
Ajjeechaa Haacaaluu booda maaltu ta’e?
Maallaqa filannoof baasu osoo misoomarra oolche gaarii akka tures kaasu.
”Kanneen filmaata biraaf [qabaniif] aangoo dabarsuufi akka hin jenne kunneen sagaleen isaanii hacuucamee jira.
Ofii aangootti deebi’uf filannoo gaggeessa yoo ta’e immoo Manni Maree Federeeshinii filannoon hanga gaggeeffamu aangoorra akka turu eeyyameera,” jechuun dhaabicha qeeqaniiru.
Kanneen siyaasa xiinxalan filannoon Tigraay adeemsisa jettu agarsiistuu waldhibdee siyaasaa yoo ta’e malee dimookiraasii utuubuuf adeemsa taasifamudha jedhanii akka hin yaadne himu.
Dubbii MM Abiy hordofee namoonni yaada garaa garaa kennaa jiru. Gaazexessaan BBC Tigrinyaa Beekit T/Maariyaam akka jedhutti lammiileen Eertiraa irratti wal qoodaniiru.
MM Abiy gahee Eertiraan nagaaf gumaachaa jirtu dubbatan kanneen rakkatanii biyyaa akka bahan eeruun kan qeeqan jiru. Kanneen mootummaa deeggaran immoo dubbii MM Abiy jajan.
Gaazexessaan BBC Tigrinyaa biraa Dastaa G/Madiin garuu miidiyaa hawaasummaa gubbaa gara caalu dhalattoota Tigraay biraa qeeqatu mul’ata jedha.
Dubbii MM tibbanaa kana dura ‘badii Tigraay irratti raawwate’ jedhan waliin wal bira qabuun qeeqaa turan jechuun hima.
Maaliif Afaan Tigrinyaan?
MM Abiy Afaan Tigriffaan gaaffiifi deebii taasisuun isaanii bakkeewwan namoonni isaan morman tasgabbeessuuf akka yaadan waan akeekudha.
Akka fakkenyaattis gaaffiileen ijoo MM Abiyyiif ka’an gaaffiiwwan Tigraayitti ijoo dubbii ta’anirratti kan xiyyeeffatedha jedha Dastaan.
Dubbiin MM Abiy kuni osooma paartileen filannoorratti hin hirmaannu jedhan jiranii naannichi galmee paartilee hirmaataniif yeroo dhiheessetti kan dhagahamedha.
Filannoon Itoophiyaa maaliif darbe?
Yeroon suni boodarra ganna keessa yaadni jedhu waan ka’ef ji’uma sana keessa guyyoota muraasa akka achi siqu ta’e.
Kanuma keessa garuu sadarkaa addunyaatti weerarri koronaavaayirasii biyya seennaan Boordiin Filannoo adeemsa qophii filannoo adeemsisuu akka hin dandeenye ibse.
‘Paartilee mormituu waliin mariin itti fufa’ – MM Abiy Ahimad
Dhimma kana irratti kan mari’ate paarlaamaan Itoophiyaa yaada Boordiin Filannoo Biyyaalessaa dhiheesse raggaasisuun filannoon yeroo biraaf akka darbu ta’e.
Yeroo koronaavaayirasii filannoo gaggeessuu waan hin danda’amnef immoo Manni maree Federeeshinii ‘hanga Covid-19 ummataaf balaa ta’un isaa dhaabatuttu’ aangoon manneen maree federaalaafi naannoolee akka dheeratu taasise.
Haa ta’u malee, paartileen mormituu garaa garaa yaada kana mormun furmaata siyaasaa gaafatan turani.